Ukukhiqizwa Okusebenzayo kwe-Hops Extracts yi-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Hops kanye ne-hop extracts yizithako ezibalulekile zokukhiqizwa kukabhiya. Ama-alpha-acids a-caryophyllene (humulone) ne-beta-caryophyllene (humulene) ayizinhlanganisela ezibalulekile zokunambitheka, okunikeza ubhiya ukuvutha kwawo futhi kube nomthelela kunephunga lawo, ukwakheka kwamagwebu, nokuqina kwe-microbiological. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhipha amakhompiyutha we-bioactive kusuka kumatrix we-hops cell ukukhiqiza i-flavour-egcwele futhi egcwele i-hop ekhishwe.
Isizinda se-Ultrasonic seBitter Acids kusuka eHip
Ama-asidi ama-Hop ababayo ahlukaniswa ngama-α- kanye ne-β-acid. Ama-Bitter α-acids akhiwa izingxenye ezintathu eziyinhloko: n-humulone, ad-humulone ne-co-humulone. Ngokufanayo, ama-β acid abuhlungu ane-n-lupulone, i-ad-lupulone ne-co-lupulone. Ezikhiqizweni zokwenza utshwala nezokukhiqiza ubhiya, ama-α-acid ayindlela ebalulekile ye-acid. Ngokubilisa ama-alpha-acid ngaphansi kwezimo ezibuthakathaka ze-acidic, ama-alpha-acid asomerised bese ngaleyo ndlela aguqulwa aba yi-iso-α-acid. Ngokusebenzisa i-isomerization ama-alpha-acids angaguquki manzi aguqulwa aba yifomu ye-iso-encibilikayo, ekhombisa ukufutheka okuphathelene ne-organoleptic. Ama-β acid, angavumelani namanzi amaningi uma kuqhathaniswa ne-α-acid, awubalulekanga kangako ukukhiqizwa kwe-brewery njengoba ama-beta-acid ekhombisa izinga eliphansi kakhulu le-isomerization ngesikhathi sokubila kwe-wort.
Ngaphandle kokusetshenziswa kwayo njengesithako sokunambitha, ama-hops ayaziwa nangezakhiwo zawo ezikhuthaza impilo, ezibandakanya i-antioxidative, sedative, anti-inflammatory, anticarcinogenic, kanye nemiphumela ye-estrogenic. Isibonelo, i-xanthohumol, i-prenylflavonoid etholakala kuma-hops, iyaziwa ngemiphumela yayo enamandla ye-antioxidative. Lezi zinto ze-hops zemvelo zisetshenziselwa izithasiselo kanye nemikhiqizo yokwelapha ukusekela impilo noma ukwelapha izifo.
Ama-extracts we-hops alungiselelwe nge-ultrasonic akhipha okugcwele okubanzi, okunikeza uhla oluphelele lwezithako ezisebenzayo zezigaxa ze-hops. Ngaphandle kwama-alpha-acids a-caryophyllene (humulone) ne-beta-caryophyllene (humulene), isizinda se-ultrasonic sibuye sikhiphe amanye ama-terpenes anjenge-linalool ne-farnesene kanye namanye amakhemikhali we-phyto anjenge-polyphenols ne-flavonoids. Okukhishwa okugcwele okubanzi okwenziwe ngezinto ezibonakalayo kuyabaluleka ngokusebenza kwabo okubizwa ngokuthi yinkuthazo.
Ngesikhathi sokukhishwa kwe-ultrasonic, izinto zezitshalo, ezinjenge hop hop namanye amakhambi, zicutshungulwa emazingeni okushisa aphansi, kunciphise ukonakaliswa kwamandla okushisayo. I-Sonication ivumela ukusetshenziswa kwezixazululo ezinobumnene, eziphephile nezinobungane bemvelo – ukugwema ukusetshenziswa kwe-solvents enobuthi.
Ukusebenza okuphezulu kokukhishwa kwe-ultrasonic kuvumela ngisho nokukhiqiza ama-hops akhipha kuma-hops asetshenzisiwe. Inqubo enkulu yokususa i-ultrasonic ikhipha izinhlanganisela zezithombe ezisele kuma-hops asetshenzisiwe futhi zisiza ukuqeda ama-hops asetshenzisiwe kusuka kuzo zonke izinto ezibalulekile ukuze kungabikho izinto ezi-bioactive ezichithwayo.
Kungani Usebenzisa Ama-Hops Extracts?
Lapho kusetshenziswa isithako sokunambitha, okukhishwa kuvumela ukufakwa okucace ngqo komoya omunyu nephunga ngoba iziqobosho ze-hop zibekwa emgangathweni ngokuya ngamanani athize kanye nokwenziwa kwama-alpha acid. Lokhu kunika amandla ukukhiqiza iphrofayili yokunambitheka efanayo futhi ngaleyo ndlela umkhiqizo osezingeni eliphakeme ogcwalisa okulindelwe kwamakhasimende.
Lapho isetshenziswa njengesithako esisebenzayo kwezithasiselo nemikhiqizo yezokwelapha, iziqalo ze-hops zinikeza inani elihlanganiswe kakhulu lezinto ezi-bioactive, isib. Terpenes, flavonoids. Ngaleyo ndlela, kungenzeka ukufaka inani eliphakeme le-photo-compund esebenzayo ukuze uzuze umphumela oqondiwe.
Ukuhlaziywa kwe-gesi ye-chromatography yama-hops we-ultrasonic alungiselelwe nge-homogenizer ye-ultrasonic UP100H: I-β-caryophyllene oxide, i-cy-caryophyllene, i-α-pinene, i-mycrene, i-limonene, i-cy-caryophylene, ne-caryophylene oxide nabanye.
Isizinda se-Ultrasonic Hops
I-Ultrasonically isheshiswe i-solvent isizinda iyindlela elula, esheshayo negciniwe yokukhishwa kwama-asidi amabi kuma-hops. Ukuba ukwelashwa okushisa okuphansi, isizinda se-ultrasonic hop sisusa isivuno esikhulu ngesikhathi esifushane senqubo, okuyizinzuzo ezinkulu ngokuqhathaniswa nokukhishwa okubucayi kwe-asidi ejwayelekile kusuka hop.
Amazinga okushisa aphansi, ukuvunwa okuphezulu, ikhwalithi ephezulu yokukhipha (isb. Ukunambitheka okugcwele / ukukhishwa okugcwele) nesikhathi esifushane kakhulu sokwenza izinzuzo eziphambili zokukhishwa kwe-ultrasonic hops.
Isizinda se-Ultrasonic Hop – Izinzuzo:
Iphrofayili yokunambitheka okugcwele
Iphunga elikhethekile elihlukahlukene ligcinwe
Umunyu / ukunambitheka okukhona
Kwezomnotho, i-RoI esheshayo
I-Hielscher Ultrasonics inesipiliyoni eside ekubumbeni, ekukhiqizeni nasekunciphiseni okokusebenza okuphezulu okusetshenziswayo kwe-ultrasonic okuncane kuya ngezinga elikhulu lezimboni ezinkampanini nasezinkampanini ezaziwayo emhlabeni jikelele. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher aletha i-high-Power ultrasound, aqinile futhi angagijima kalula i-24/7 ngaphansi komthwalo osindayo. Lokhu kwenza ama-Hielscher ultrasonors akhiphe ihhashi lomsebenzi athembekile emkhakheni wokudla, i-pharma, kanye nomkhakha wamakhemikhali.
Zonke izinqubo ezisebenza nge-digital ultrasonic zifakwe ngombala wokuthinta wombala, ongasetha kuwo futhi ulawule izinqubo ezisebenzayo kalula futhi ngokunembile. Ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi yonke imingcele yenqubo iqoshwa ngokuzenzakalela lapho nje uvula isithasiselo se-ultrasonic.
Idizayini eyinkimbinkimbi ye-Hielscher's batch kanye ne-inline sonication setups ihlolwe kakhulu futhi ilungiselelwe ukusetshenziswa kobungani bomsebenzisi kanye nokukhishwa kwekhwalithi ephezulu. Ama-flow cell reaction atholakala ngosayizi ahlukahlukene nangama-geometries ahlukahlukene. Uhla olubanzi lwama-sonotrodes (ama-proses of ultrasonic) anezimo ezahlukahlukene, osayizi, nobude kanye nezinye izesekeli ezingeziwe zivumela ukumiswa okuhle kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ngokuya ngenqubo yakho yokufikisa kanye nezinto zokutshala.
Enye inzuzo ye-Hielscher Ultrasonics’ Izimboni zokuqhubekisa ukusebenza kwezezimboni kungukulethwa kwezindawo eziphakeme kakhulu ezifika ku-200µm, ezingasebenza kalula nangokuqhubekayo ngokusebenza kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukulawulwa okuqondile kokukhuphuka kanye nenketho yokusebenzisa okuphansi kakhulu kuya kuma-amplopes aphakeme kakhulu kunika amandla inqubo ephumelelayo futhi ephumelelayo. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
I-Hielscher ephezulu esebenza kahle ekhishwa izithambisi ze-Ultra zokukhishwa okuphakeme!
UMaša Knez Hrnčič; Eva Evapaninge; Iztok Jože Košir; U-Željko Knez; I-Urban Bre (2019): Amakhompiyutha weHip: Amasu Wokuqothula, Ukuhlaziywa Kwamakhemikhali, Ama-antioxidative, ama-Antimicrobial kanye ne-Anticarcinogenic Imiphumela. Izinduna 2019, 11, 257.
I-Steffen Arctander (2019): Izinto ezi-Perfume ne-Flavor zoMvelo Yemvelo. I-Orchard Innovations; Ngo-Okthoba 2019.
I-Bioactive Compounds kumaHops
Isitshalo sehip hop esivamile Humulus lupulus Ucebile ngamakhemikhali wezithombe, asetshenziswa njengezithako zokunambitha kokudla neziphuzo (isib. ubhiya obabayo) kanye namakha namakha. Ezithasisweni zokudla nemikhiqizo yokwelapha, ama-hops akhipha isetshenziselwa ukusekela ezempilo kanye nokwelapha noma ukunciphisa izifo. Thola incazelo yama-phyto-compounds abaluleke kakhulu we-phyto-comports ngezansi:
Ama-alfaid noma ama-humulones ayinkimbinkimbi ebaluleke kakhulu yamakhemikhali ngaphakathi kwehip hop. Ngesikhathi sokubila kwe-wort, ama-humulones afakwa ku-Thermally isomerized into ama-iso-alpha-acid noma ama-isohumulones, anecala ukunambitheka okubabayo kobhiya.
AmaHops aqukethe okuthiwa yi-beta-acid noma i-lupulones. Lezi zingcezu zibaluleke kakhulu ngeminikelo yazo yephunga kubhiya.
Izakhi ezibalulekile ze-hops oyela obalulekile ama-terpene hydrocarbons aqukethe i-myrcene, humulene ne-caryophyllene. I-Myrcene inikeza iphunga elisha lokuphunga kwayo. I-Humulene nemikhiqizo yayo yokusabela i-oxidative ineqhaza kunephunga eliphambili le-hop kubhiya. Ngokubambisana, i-myrcene, humulene, ne-caryophyllene amele ama-80 kuye kwangama-90% wokuqukethwe okuphelele kwama-hops ama-oyili abalulekile.
I-Xanthohumol iyi-flavonoid eyinhloko kuma-hops. Amanye ama-prenylflavonoids afundwe kahle futhi abalulekile yi-8-prenylnaringenin ne-isoxanthohumol. Ngenkathi kufaneleka kanye nemiphumela ye-xanthohumol kanye nemiphumela kusacwaningwa, i-prenylflavonoid 8-prenylnaringenin isivele yaziwa ngokuthi yi-phytoestrogen enamandla.